Zink Vulkan mutongi anogara paMesa nechinoshamisa kusimudzira | Linux Vakapindwa muropa
Mutungamiriri Zinc Vulkan ikozvino nyika paMESA, iine kumwe kuvandudzwa uye mazana emavhidhiyo mazita emitambo anozoita nekuwana kunoshamisa kunatsiridza mukuita. Muchokwadi, vagadziri vayo vanovimbisa kuti iko kuvandudzwa kunowanikwa kwaizopfuura 1000% yeFPS (Mafuremu Pasekondi).
Zink ndeye OpenGL kuitisa iyo inoshanda pamusoro peiyo Vulkan API. Kubudirira kunonakidza uye nehunhu hwakakura hwenyika ye vhura sosi giraidhi madhiraivha Linux. Iye zvino kodhi nyowani ine kuita kwekuvandudza kweMESA.
Shanduko mukodhi yekodhi dzakanangana chaizvo neyakaganhurirwa. Chinhu chawakashandira Mike blumenkrantz, mugadziri pasi pesungano neValve uye ari kushanda pamwe neiyi purojekiti. Iye pachake akaratidza kuti Tomb Raier mutambo wevhidhiyo unomhanya muZink neiyi kodhi nyowani yaizobva kubva ku9 FPS kuenda ku91 FPS. Kusvetuka kunoshamisa ... Blumenkrantz iye pachake akataura kuti "kuita mumitambo yakaita seTomb Raider kwaonekwa kuchikwira nekupfuura 1000%".
Munguva pfupi yapfuura iyi kodhi akauyawo kuMesaNaizvozvo, inofanirwa kuoneka mune inotevera vhezheni 21.3 yeiyi imwe chirongwa, iyo yakarongerwa kuburitswa kupera kwegore rino.
Zviripachena, kuwedzera uku hakuzove kuri mumazita ese, uye hazviitwe pakuitwa kweiyo videojuego senguva dzose, asi zvinoenderana nedata rakatanga kuwanikwa paZink zvichienzaniswa nedata rakawanikwa paZink pamwe nekusimudzira. Kunyangwe zvakadaro, zvichiri kushamisika uye chiratidzo chekuti mutyairi ari kukura, achibvumira mimwe mitambo yeOpenGL kumhanya paVulkan.
Kune rimwe divi, ikozvino Zink zvakare inosanganisira dzimwe shanduko dzinoenderana ne compatibilidad, zvinoreva kuti izvi zvinobvumidza kuunza mamwe akawanda mazita emitambo anoenderana ...
Mamwe mashoko - Blog
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Zink Vulkan mutongi anogara paMesa nekunakidza kusimudzira
SPRAWL: sangana neiyi nyowani FPS-mhando vhidhiyo mutambo